Taageerada rasmiga ah ee Linux ee Apple Silicon waxay imaan kartaa Juun | Waxaan ka socdaa mac
Taageerada rasmiga ah ee Linux ee Apple Silicon ayaa imaan karta bisha Juun
In kastoo aan jecel nahay nidaamka deegaanka ee Apple oo aan ku faraxsanahay nidaamka qalliinka macOS oo ka mid ah Mac-yadayada, waxaa macquul ah inaad gabi ahaanba ubaahantahay inaad lashaqeysid codsi loogu talagalay kaliya nidaam kale, sida Windows ama Linux, waana inaad softwaresadan kumbuyuutarkaaga ku haysataa.
Haddii aad iibsatay mid ka mid ah Apple Silicon cusub oo aad u baahan tahay inaad rakibto Linux, waxaa jira durbaba qaar ka mid ah dhinac saddexaad "balastar" ah oo sidaas lagu sameeyo. Laakiin sida muuqata, shaqadu horay ayey ugu socotaa nooca Linux 5.13 oo la jaan qaadaya processor-ka M1, kaas oo la sii deyn doono bishaan Juun. Waxaad horey u haysatay cudurdaar kale oo aad ku iibsato Apple Silicon. Oo haddaba waxaa jira dad badan oo la ururiyey ...
In kasta oo aan aragnay dadaallo kala duwan oo kala duwan si loo keeno taageerada Linux-ka ah Mac M1s, oo leh guul ka yar ama ka yar, taageerada rasmiga ah way imaan kartaa si ka dhakhso badan sidii la filayay. Sida lagu sheegay warbixinta Phoronix, nooca soo socda ee Linux 5.13 waxay noqon kartaa markii taageero hordhac ah loogu talagalay Silicon Apple.
Maqaalka ayaa sharxaya in iyadoo waayo-aragnimadda ku shaqeyneysa Linux-ka ee loo yaqaan 'Mac M1' ay wali hayso habab loo maro, haddana arrimuhu hadda "waa horumarsan yihiin" in kernel-ka Linux 5.13 uu ku shaqeyn karo processor-ka Apple ee M1. Xuddunta ayaa la filayaa Linux 5.13 wuxuu bilaabmayaa bisha Juun.
Tan iyo bilowgii sanadkan waxaa jiray qaar ka mid ah Linux kernel patch sii daayo si loogu daro darawalada lagama maarmaanka ah ee loo baahan yahay si loogu kiciyo Linux kernel xilligan cusub Apple Silicon Mac Mini, MacBook Pro iyo MacBook Air 2020.
La qabsigaani wuxuu horeyba ugu jiraa marxalad aad u horumarsan, sidaa darteed waxay u badan tahay in lagu soo dari doono nooca 5.13 ee kernel-ka Linux, kaasoo si rasmi ah loo sii deyn doono bisha soo socota junio.
Tani waxay timid ka dib markii Corellium uu awood u yeeshay inuu dekedda dejiyo Ubuntu, oo ah qaybinta caanka ah ee Linux, ee loogu talagalay Mac M1s bisha Janaayo. Tan, si kastaba ha noqotee, waxaa lagu sameeyay "jajabinta" nidaamka hadda jira, iyada oo aan kernel-ka Linux-ka ah dib loo soo saarin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Taageerada rasmiga ah ee Linux ee Apple Silicon ayaa imaan karta bisha Juun
Cornelius Smith Jr wuxuu ku biirayaa kooxda shanta maalmood ee xuska
Justin Timberlake ayaa la ciyaari doona Chuck Barris, oo ah suurta galnimada dilka CIA